မေမေ အားလုံးအတွက်...! | အိမ်လွမ်းသူ...
မေမေ သားအဝေးမှ မေမေ ကိုယ်ရှိခိုးပါတယ်..!မေမေ ကျန်းမာပါစေ...!မေမေ ပျော်ရွှင်ပါစေ...!မေမေနှင့် အတူ ဖေဖေ ကိုယ်လည်းထပ်တူပါ...! ကျွန်တော့် မေမေနှင့်အတူ မေမေ အားလုံး ပျော်ရွှင်မှု့အပေါင်းနှင့်ပြည့်စုံပါစေ...!သား ကဗျာတော့ မရေးတက်ဘူး သားကြိုက်တဲ့ အဆိုတော် "မျိုးကြီး.." သီချင်းနဲ့ အမေများနေ့ကို ဂုဏ်ပြုပါတယ်...!
5 Response to မေမေ အားလုံးအတွက်...!
သားရင်ထဲက အမေကို သတိတရရှိနေရင်ပဲအမေကျေနပ်ပီတိဖြစ်ရပါပြီ
သားလေးကျန်းမာပျော်ရွှင် အလုပ်အောင်မြင်ပြီကြင်ယာအမြန်ရှာနိုင်တွေ့ နိုင်ပါစေ..
လို့ အမေကပြောနေလိမ့်မယ် :Pအမေများအားလုံးကျန်းမာကြပါစေ
ကဗျာမဟုတ်ပေမယ့် သားရင်ထဲက လှိုက်လှိုက်လှဲလှဲခံစားရေးဖွဲ့ထားတဲ့ စာကြောင်းတွေမှာ အမေ့အပေါ်ထားတဲ့ အချစ်တွေကို လေးလေးနက်နက်မြင်နိုင်ပါတယ်
အေးဗျာ .. ထပ်တူခံစားခဲ့ပါတယ်